crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Damiirku ha shaqeeyo!! | HimiloNetwork
Damiirku ha shaqeeyo!!
Posted by: Zakariya in Wararka August 5, 2015	0 356 Views
Waxaa soo sawiray bahda Himilonews
Markay diintu hab-dhaqan fuliya wayso, dhaqanka ayaa diinta muuna dila. Halkani waa hoyga Maktabadaha ugu wayn Muqdisho. Waa goobta ugu balaaran ee lagu iibiyo buugaagta kala duwan ee aqoonta. Ugu yaraan boqollaal buugag ah ayaa maalintii lagu kala gataa gudaheeda kuwaas oo badigood ka hadla waxbarasho ku saabsan nolosha oo dhan.
Haddii nolosha la nool yahay lamid tahay waddo la maro, marinku macno kuma lahan sida uu kuula yaallo ee sida aad ku mari karto ayaa micno kuugu fadhida.
Marka buugga waxa ku qorani ban-dhig fal-galin ah uu helo, cilmigu markaas ayuu helaa hiilladaada. Suurayso meel buugaag diini ah lagu iibinayo–kuwaas oo ay ku yaalliin axaadiis tilmaamaysa in nadaafaddu tahay iimaanka barkiisa–hadana isla iibsadaha buugga hareerihiisa ay yaalliin qashin, dhiiqo iyo uskag. Su’aasha is-weydiinta lihi marka waxay tahay: Muxuu Xadiisku soo kordhiyay?!
Dhibta ugu wayn ee Soomaalideenna haysata ma ahan aqoon-darri iyo makasnimo. Waa dhaqan-galin la’aanta aqoonta aan baranay. Inta ay maqan tahay dhaqan-galin la’aantaasuna, si walba oo aqoontayadu usii korortaa micno ballaaran ma sameyn doonto.
Bal daawo Xareed oo ah goobta aan ka hadlayo oo inoo sheeg–marka uu damiirkaagu ku tuso damiir la’aanta ku haysata–sideed isku moodsiisaa eeddaada?!
Halkan ka daawo sawirrada aan kasoo qaadnay Xareed wadooyin soo gala.
Next: Baxaalliga Fiidmeerta!
Marka aad tiraahdo Mahadsanid.